महमा अमला डुबाएर दैनिक खाँदा हुन्छ विश्वासै नलाग्ने यस्तो चमत्कार…पुरा पढी सेयर गर्नुहोस् । – yuwa Awaj
कार्तिक २३, २०७७ आइतबार 10
एजेन्सी : अमला एक यस्तो फल हो जुन आफ्नो पोशक तत्वको लागि चिनिन्छ । यो आयुर्वेदिक चिकित्सामा ‘दिव्य आयु’ को रुपमा जानिन्छ जसमा निकै बिमारीहरुलाई टाढा राख्ने क्षमता हुन्छ । अमला एक अमिलो फल हो । यसलाई प्राय महको साथ खाइन्छ। महले अमलाको स्वाद बढाउने मात्रै नभई यसको लाभ पनि दुई गुणा बढाउछ । आउनुहोस् जानौँ यसका लाभहरु :
मह र अमलाको मिश्रण:
महको केहि थोपालाई अमलामा मिलाएर खाँदा यो स्वादिस्ट मात्र हुँदैन यसको निकै लाभ पनि हुन्छन् । अमला र महले धेरै बिमारीको उपचार गर्छ । विशेष रुपले घाँटीमा खसखस, चिसो, खोकी र फ्लुबाट राहत दिन्छ । महमा भिजाइएको अमलाले लिभरको कार्यक्षमतालाई प्रोत्साहन पनि गर्दछ
जसले इन्सुलिनको राम्रो उत्पादनमा मद्दत गर्दछ । नियमित रुपमा मह र अमला सेवन गर्दा तौल पनि घट्छ र कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि कम गर्दछ । यसको मिश्रणमा अद्भुत सौन्दर्य लाभ पनि छ र कपाललाई दुई गुणा बढाउँछ ।
कपालको लागी लाभदायक:
अमला स्वस्थ कपाल विकासलाई समर्थन गर्नको लागि एक उत्कृष्ट औषधि हो । यसले कपाललाई समय अगावै सेतो हुन कम गर्दछ । साथै तपाइको कपाललाई चमकदार र सुन्दर बनाउँछ । अमला र महको मिश्रणले कपाललाई बलियो बनाउनुको साथै सुख्खापन कम गर्दछ ।
आस्थमाको लागी लाभदायक
आस्थमाको लक्षणको उपचारको लागि पारम्पारिक उपचारहरु मध्ये एक हो अमला र महको मिश्रण । यसले कफको उत्पादन र स्वास समस्यालाई नियंत्रण गर्दछ । यसले तपाइको स्वास पथलाई सफा गर्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाइले पुरा स्वास लिन सक्नुहोस् ।
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ:
अमला एक साचो फाइटर हो र महले यसलाई भित्ताको झैँ सहारा दिन सक्छ । महको साथ अमला सेवन गर्दा यसले निकै बिमारीको रोकथाममा लाभ पुर्याउँछ र तपाइको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।
अमलाले छालाको गुणमा सुधार गरेर उमेर बढ्ने संकेतलाई रोक्दछ । एन्टी-अक्सिडेन्टबाट भरपुर भएको कारण यसले अक्सिकरणबाट हुने नोक्सानलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ । अमलाको रसले कोशिकाको पुन निर्माणमा मद्दत गर्दछ । महले पिग्मेन्टेशनलाई कम गर्न र छालालाई सफत गर्न मद्दत गर्दछ ।
उत्त’र सि’रान पारेर यसकारण सुत्न हु’दैन ! शास्त्रहरूमा जीवनका सबै जरुरी कामका लागि खास कुराहरू बताइएका छन् । यी कुरालाई ध्यानमा राख्दा स्वास्थ्य लाभका साथसाथै सुख समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ । सुत्नु दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण अंग हो । सुत्दाखेरी लापरवाही गरेमा स्वा’स्थ्यलाई प्रतिकूल अ’सर पर्छ ।
कुन दिशामा शिर अनि कुन दिशामा गोडा पारेर सुत्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । दक्षिण दिशामा शिर अनि उत्तर दिशामा गोडा पारेर सुत्नु सर्वोत्तम मानिन्छ । यसरी सुत्दा धेरै बिमारी लाग्न पाउँदैनन् । वातावरणमा चुम्बकीय शक्ति रहेको हुन्छ र यो शक्ति दक्षिणबाट उत्तरतिर गइरहेको हुन्छ ।
हामीले दक्षिणतिर शिर पारेर सुत्दा यो ऊर्जा हाम्रो शिरबाट पसेर गोडाको बाटो हुँदै निस्कन्छ । यसरी ऊर्जाको यात्राक्रममा भोजन पनि मजाले पच्छ । यसरी सुतेर बिहानीपख उठ्दा हाम्रो दि’माग शान्त हुन्छ र हामी ताजापन महसुस गर्छौं । यसको ठीक उल्टो दक्षिण दिशामा गोडा पारेर सुत्दा चुम्बकीय ऊर्जा गोडाबाट छिरेर शिरतिर पुग्छ । त्यो चुम्बकीय ऊर्जाले तपाईंको मस्तिष्कमा अनावश्यक दबाब दिन्छ किनकि शरीरका विभिन्न अंगलाई छुँदै छिरेको ऊर्जालाई म’स्किष्कले सोस्छ र भारी बढाउँछ ।
त्यो अवस्थामा तपाईं ५ देखि ६ घन्टा रहनुभयो भने दिमागलाई लगातार दबाब परिरहन्छ र रो’गहरू लाग्न थाल्छ । दक्षिण दिशातर्फ शिर पारेर सुत्न सकिएन भने पूर्व दिशामा शिर अनि पश्चिम दिशामा गोडा पारेर सुत्नु राम्रो हुन्छ । सूर्य पूर्व दिशाबाट उदाउँछ र बिहान पूर्व दिशातर्फ शिर हुँदा सूर्य भगवानको सम्मान हुन्छ । पश्चिममा टाउको पारेर सुत्दा एकाबिहानै सूर्यलाई गोडा देखाएर अपमान गरेको ठहर्छ ।
दक्षिणतर्फ किन सिरानी बनाएर सुतिन्छ ? दक्षिण दिशामा किन सिरानी बनाउनुपर्छ ? यसको धार्मिक महत्व के छ ? वैज्ञानिक रहस्य के छ ? किन उत्तरतर्फ सिरानी बनाउनु हुँदैन ? उत्तर वा पश्चिमतर्फ सिरानी बनाए के हुन्छ ? अहिले हामीलाई यस्ता कुरा बेकारको लाग्नसक्छ । अर्थात अर्थहिन लाग्नसक्छ । यद्यपी हाम्रा पिता-पूर्खाले भन्दै र गर्दै आए, ओछ्यान बनाउँदा दक्षिण दिशातर्फ सिरानी बनाउनुपर्छ ।
दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व जता बनाएपनि के हुन्छ ? हामीलाई मतलब भएन । किनभने हामीलाई लाग्यो यि कुरा अन्धविश्वास हुन् । पुरातन धारणा हुन् । यस्तै मानसिकता बोकेर हामीले सुत्नका लागि कसरी र कस्तो अवस्था अपनाउने भन्ने कुराको पालना गरेनौं । यद्यपी अझैपनि बुढापाका भन्छन्, दक्षिणतर्फ सिरानी बनाउनुपर्छ ।
खासमा राम्रो स्वा’स्थ्यका लागि पौष्टिक आहार, यो’ग ध्यानका साथसाथै नियमित दिनचर्या पनि जरुरी छ । दिनचर्यामा सही समयमा उठ्ने र सुत्ने तालिका पनि पर्छ । अतः हाम्रा शास्त्रमा लेखिएको छ, कसरी सुत्ने ? कुन दिशातर्फ सिरानी बनाउने ? यसमा आफ्नै किसिमको धार्मिक महत्व दर्शाइएको छ । यद्यपी धार्मिक कुरामा वैज्ञानिक अर्थ एवं रहस्य पनि लुकेको हुन्छ । जस्तो कि, सिरानी कुन दिशामा लगाउने वा कता टाउको फर्काएर सुत्ने भन्ने कुराको पनि बैज्ञानिक कारण छ ।
Prevमकैको जुंगाको यस्तो चमत्कारिक उपाय जुन तपाइँलाई सायदै थाहा होला…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
Nextकसैको तागत छ भने सरकार ढालेर देखाऊ, घरमा बसेर उफ्रेर हैन : मन्त्री भट्टराई !
हार्दिक बधाई ! सपना रोका मगर विश्वका सय प्रभाव’शाली महिलाको सूचीमा…हेर्नुहोस् ।